လျှပ်စစ်မီတာခ. အကြွေးကျန်တာ ဘာကြောင့်လဲ(( မသိလို့မေးတာပါ)) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လျှပ်စစ်မီတာခ. အကြွေးကျန်တာ ဘာကြောင့်လဲ(( မသိလို့မေးတာပါ))
လျှပ်စစ်မီတာခ. အကြွေးကျန်တာ ဘာကြောင့်လဲ(( မသိလို့မေးတာပါ))
Posted by မုန်းအောင်ချစ် on Feb 16, 2012 in Copy/Paste |7comments
လစဉ်ကောက်ခံလျှက်ရှိတဲ့ လျှစ်စစ်မီတာခ ဘီလ်များကိုလဲ မှန်မှန်ကန်ကန်ပေးဆောင်နေပါရက်နဲ့
အခု မီတာခ တွေ ဈေးတက်တော့ ယခင် မီတာခ အကြွေးကျန် တဲ့ အတွက်ဆိုပြီး 1 သိန်းပါး ကောက်ခံလာပါတယ်
သုံးရင် သုံးသလောက် လစဉ် မှန်မှန် ဆောင်နေရတာ ပြသနာမရှိပါ
ဒီလိုကြီး အကြွေးကျန်ပါတယ်ဆိုပြီး နင့်နေအောင် တစ်ခါတည်း ဆောင်ရတာတော့ သာမန်လူတန်းစားအတွက် မလွယ်ပါဘူး
မီတာ မှန်မှန်ဖတ်ပြီး..မှန်မှန်လေးကျသင့်သလောက် တောင်းခံသင့်ပါတယ်.
ပို့စ်ရှင်ရေ…များလည်းဂလိုဘဲခံစားခဲ့ရတယ်ကွယ်။ ပို့စ်ရှင်ကမှကြွေးကျန်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့လာသေးတယ်။ များတို့ကတော့ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိဘဲ ခါတိုင်းဆောင်နေကြရဲ့လ တွေထက် ၄ ဆလောက်ပိုပြီးဆောင်ခဲ့ရတယ်။ မီတာဘေဆောင်တဲ့နေရာတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲမေးတော့လည်း ရုံးချုပ်ကိုသွားမေးပါလုပ်တယ်။ ရုံးချုပ်သွားမေးရင်လည်းအလုပ်ကခွင့်ယူရဦးမယ်။ ကိုယ်လည်းမသွားတတ်တော့ ၂ယောက်သွားရဦးမယ်။ နောက်လကျတော့ မီတာဘေက ပုံမှန်နီးပါးပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကစပြီးဆောင်ထားတဲ့မီတာယူနစ်တွေ လတိုင်းကိုပြန်စစ်ကြည့်တော့လည်းမီတာယူနစ်တွေမကွာဘူး။ အဲဒီလတလဘဲအရမ်းမြင့်တက်သွားတာ။ ကိုယ်တွေဘက်လည်းထူးခြားပြီသုံးစရာဘာမှမရှိဘူး။ ဟင်းလည်းလျှပ်စစ်နဲ့မချက်ဘူး။ ဒါကမလေးရှားမှာဖြစ်တာ။ ဒါကြောင့်မလေးရှားလည်းဗမာပြည်နဲ့ဘာမှမထူးဘူး။
တချို့ ရပ်ကွက်တွေမှာဆို မီတာ ဖတ်တဲ့သူတွေက လာမဖတ်ပဲနဲ့ မှန်းပီး ယူနစ်တင်တာတွေရှိပါတယ်..
အဲလိုတင်ပီး တကယ်စာရင်း လိုက်ကောက်တဲ့အခါကြတော့ ယူနစ်တွေလွဲနေတော့တာပေါ့..
အဲလိုတွေမဖြစ်အောင် အိမ်ပိုင်ရှုင်တွေက ကိုယ့်မီတာမှာ တစ်လကို ယူနစ်ဘယ်လောက်တတ်နိုင်လဲ ဆိုတာကို လစဉ် မီတာမှာစစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်…
များသောအားဖြစ် အဲလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
သိတာလေးမျှရုံမက ကြုံဘူးတာလေး ကော..
မီတာမှန်မှန် အမှန်တစ်ကယ်လာဖတ်တာ နဲတယ်လို့ထင်ပါတယ် …အများအားဖြင့် ဒီအိမ် ဘယ်လောက်ကျလေ့ ရှိတယ်ဆိုပြီး ရမ်းရေးကြပါတယ် ။ အဲသုံးလေးလ လောက်မှ တစ်ခါ ဖတ်ပြီး ကွာ တာတွေ ပြန်ညှိတတ်ကြပါတယ် ။
ကျွန်တော် တစ်ခါဖြစ်တာတော့ ကိုယ်ဟာကိုယ် မီတာ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ဖတ်ထားတာနဲ့ အများကြီး ကွာနေပါတယ် ။ တစ်သိန်းကျော်ပိုတောင်းခံရတာပါ ။ ဒါနဲ့ မြိုနယ်လျှပ်စစ် (ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်) က သွားပြောတော့ Bill ထုတ်ပြီးပြီမို့ အဲ့ဒီ အတိုင်းဆောင်ပါ ။ ပြန်မပြင်ပေးနိုင်ပါတဲ့။ နောက်လ များမှာ လျှော့ဖတ်ပြီးပြန်ညှိပေးသွားပါမယ်တဲ့ ။ လက်မခံနိုင်ဘူး ပြောတော့ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းလာမဆောင်ရင် မီးဖြတ်မှာဘဲတဲ့ ။။ အကျယ် အကျယ် မဆက်ခြင်တော့တာ နဲ့ ဆောင်လိုက်ရတယ် ။
ကိုထူးဆန်းမှာ လဲမလွယ်တဲ့အခက်အခဲပါလား။နောက်လတွေမှာ ညှိနှိုင်းပေးမယ်ဆိုတော့
တော်ပါသေးတယ်။မီတာထိန်းသိမ်းခတို့ ဖုန်းထိန်းသိမ်းခတို့ ကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တိတိကျကျလေး လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ
လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများကိုလဲ လစဉ်ပုံမှန်လေးတော့အလုပ် လုပ်စေချင်ပါတယ်
နောက်မှ ကျန်ပါတယ်ဆိုပြီး.စုတောင်းတော့ ပိုက်ဆံမရှိရင် ဘယ်လိုလုပ် ဆောင်ရတော့မှာလဲ
လက်ကျန် ဘယ် နှစ်ယူနစ် ကျန်ပါတယ်ဆိုပြီး လာဖတ်တဲ့ အချိန် လက်မှတ်က ထိုးခိုင်းသေးတယ်ဗျာ.
မီတာခ လာကောက်ကတည်းက မီတာပုံထဲက သုံးစွဲထားတဲ့ ယူနစ်နဲ့ ပြေစာပေါ်က ယူနစ် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထားသင့်တာပေါ့…။ အဲဒါဆို ဘာမှပြောလို့မရဘူး…။ ဒါပေမဲ့ သဒေါင်းစားတွေက မီတာပုံးကိုလတိုင်းမကြည့်ပဲ ရမ်းကောက်နေတာတွေများတယ်…။ မီတာခ သွားသွင်းတိုင်း လျော့ကောက် /ပိုကောက်တွေကို လတိုင်းလိုက်ပြောနေရတယ်…။